Rooster | foodpanda riders MM
Rooster ဆိုတာ Roadrunner အက်ပ်ပလီကေးရှင်းထဲမှာရှိတဲ့ အက်ပ်ပဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Roadrunner> Menu bar မှာရှိတဲ့ Shifts ကိုနှိပ်ပြီး Rooster ထဲကို ဝင်ရောက်နိူင်ပါတယ်။
Rooster ထဲမှာ ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲ?
လက်ရှိရောက်နေတဲ့အဆင့်နဲ့ ကိုယ်ရဲ့ရမှတ်တွေကို ကြည့်လို့ရမယ်။
အလုပ်ချိန်တွေ ဘိုကင် လုပ်လို့ရမယ်။
ဘိုကင်လုပ်ထားတဲ့ အလုပ်ချိန်တွေကို ကြည့်လို့ရမယ်။
ကိုယ်အလုပ်ဆင်းခဲ့ပြီးတဲ့ အချိန်တွေကို ပြန်ကြည့်လို့ရမယ်။
ကိုယ်ရဲ့ Rider ID နံပါတ်ကို Rooster မှာ ကြည့်လို့ရမယ်။
လက်ရှိရောက်နေတဲ့အဆင့်နဲ့ ကိုယ်ရဲ့ရမှတ်တွေကို ဒီလိုကြည့်မယ်!
Roadrunner အက်ပ်> Menu bar> Shifts ထဲကိုဝင်ရောက်ပါ။ ပြီးတဲ့အခါ Menu bar ကိုထပ်နှိပ်လိုက်ရင် အခုလို မြင်တွေ့ရပါပြီ။
ဒီနေရာကိုနှိပ်ပြီး ''လက်ရှိအဆင့်နှင့် ရမှတ်များ'' ကိုကြည့်နိူင်ပါတယ် . . .
သင့်ရဲ့လက်ရှိ Batch (အဆင့်) ပါ
ကိုယ့်ရဲ့ အလုပ်ချိန်တွေ ဒီမှာဝင်ရောက်ပြီး ဘိုကင် ကြိုလုပ်မယ်!
Roadrunner အက်ပ်> Menu bar> Shifts ကို အခုလိုဝင်ရောက်လိုက်တာနဲ့ ဘိုကင်ပြုလုပ်ပြီး အလုပ်လုပ်ကိုင်လို့ရမယ့် အလုပ်ချိန်တွေ မြင်ရပါမယ်။ ဘိုကင်ပြုလုပ်ဖို့အတွက် ပုံမှာမြင်တွေ့ရတဲ့ ''Take Shift'' ကိုနှိပ်ပြီး ရယူနိူင်ပါတယ်။ (ဒီနေရာမှာ အလုပ်ချိန်တွေက နေ့လည် ၁၂ နာရီကျော်ပြီဆို ၁၃ နာရီ, ၁၄ နာရီ စသဖြင့် ဖော်ပြတာကြောင့် သတိထားပြီး အလုပ်ချိန်တွေကို သေချာရွေးချယ် ဘိုကင်လုပ်စေချင်ပါတယ်)
သေချာပြီဆို ''Take'' ကိုနှိပ်ပြီး ရယူပါ။
အလုပ်ချိန်တွေ ဘိုကင် လုပ်တဲ့နေရာမှာလဲ Batch အလိုက် တစ်ပတ်စာ Shift
ဖွင့်တဲ့ရက်တွေမှာ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် အလုပ်ချိန်ကောင်းနဲ့ဇုန်တွေကို ရွေးချယ်ယူနိူင်ဖို့
ကိုယ်က Batch ကောင်းကောင်း ရောက်နေဖို့တော့လိုအပ်ပါမယ်နော်!
နောက်တစ်ခုက ကိုယ်အလုပ်ဆင်းနေကျ ဇုန်အတွက်ပဲ အလုပ်ချိန်တွေ သီးသန့်ပေါ်အောင် ဖော်ပြပါပုံလေးကို နှိပ်ပြီး အလုပ်ချိန်တွေကို ရွေးချယ် ဘိုကင်လုပ်လို့လည်းရပါတယ်။
ဘိုကင် လုပ်ထားတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ချိန်တွေကို ဒီလိုကြည့်မယ်!
Rooster ထဲက Menu bar> My Shifts ကိုနှိပ်ပြီး ဘိုကင် လုပ်ထားတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ချိန်တွေကို ကြည့်ရှူ့လို့ရပါတယ်။ (ဘိုကင်ပြုလုပ်ပြီးတိုင်း ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်အလုပ်ချိန်တွေကို မမေ့မလျော့ဘဲ
ပြန်စစ်ဆေးပြီး အလုပ်ပျက်ကွက်မှုမရှိ/အလုပ်ချိန် နောက်မကျအောင် ဘိုကင်ယူထားတဲ့ အလုပ်ချိန်မတိုင်ခင် အနည်းဆုံး မိနစ် ၃၀ အလိုမှာ ဇုန်ထဲကိုရောက်ရှိပြီး အလုပ်စတင်ဖို့ပြုလုပ်စေချင်ပါတယ်)
ကိုယ်ရဲ့အလုပ်ချိန်တွေကို အခြားသူဘက်ကို ဒီလိုမျိုးလွှဲပြောင်းလို့ရမယ်!
အရေးတကြီး အကြောင်းကိစ္စရှိလို့ ဘိုကင်ယူထားတဲ့အလုပ်ချိန်ကို ဝင်ရောက်အလုပ်မလုပ်နိူင်တော့တဲ့အခါ ဖော်ပြပါ ''Offer Swap'' ဆိုတဲ့ ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး ကိုယ်ရဲ့အလုပ်ချိန်ကို အခြားသူဆီ လွှဲပြောင်းလို့ရပါမယ်။ ကိုယ် ''Offer Swap'' လုပ်ထားတဲ့ အလုပ်ချိန်ကို အခြားသူဘက်မှ ''Take Swap'' ပြုလုပ်သွားပြီး ကိုယ်ရဲ့ My Shifts ထဲမှာလည်း ၎င်းအလုပ်ချိန် ပျောက်သွားတဲ့အခါမှ လွှဲပြောင်းမှုအောင်မြင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ (''Offer Swap'' ပြုလုပ်တော့မယ်ဆို အနည်းဆုံး (၁)ရက်ကြိုတင်ပြီး ပြုလုပ်ပါ)
အကယ်၍ အခြားသူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ ''Take Swap'' ပြုလုပ်ခြင်းမရှိပါက ၎င်းအလုပ်ချိန်အနေနဲ့ ကိုယ်ရဲ့ My Shifts ထဲမှာ ဆက်လက်ပေါ်နေမှာဖြစ်ပြီး အလုပ်ချိန်စတင်ရမယ့် အချိန်ရောက်ခါနီးအထိ ဆက်လက်ပေါ်နေမယ်ဆို ၎င်းအလုပ်ချိန်ကို လွှဲပြောင်းသူအနေနဲ့ တာဝန်ယူဆင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
''Offer Swap'' ကိုနှိပ်ပါ!
(အထူးသတိထားရမှာတစ်ခုက ''Offer Swap'' ခလုတ်ကို ရံဖန်ရံခါအသုံးပြုမှုကြောင့် မိမိရဲ့
ရမှတ်ရရှိမှုကို ထိခိုက်နိုင်ပြီး Batch အဆင့်တက်ရောက်ဖို့အတွက် နှောင့်နှေးစေတာကြောင့် သတိထားပြီး အသုံးပြုစေချင်ပါတယ်)
''Offer Swap'' ပြီးတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ချိန်တွေကို အခုလိုပြန်လည်ရယူနိူင်ပါတယ်။
''Offer Swap'' လုပ်ထားပြီးတဲ့ ကိုယ်ရဲ့အလုပ်ချိန်အား ''My Shifts'' မြင်တွေ့ရပါက ဖော်ပြပါပုံအတိုင်း ''Cancel Swap'' ကိုနှိပ်ပြီး ပြန်လည်ရယူနိူင်ပါတယ်။
အခြားသူဘက်မှ ''Offer Swap'' ပြုလုပ်ထားတဲ့ အလုပ်ချိန်တွေကို အခုလိုရယူမယ်!
အခြားသူဘက်မှ ''Offer Swap'' ပြုလုပ်ထားတဲ့ အလုပ်ချိန်တွေအနေနဲ့ ဖော်ပြပါပုံအတိုင်း ''Take swap'' လို့ပြနေမှာဖြစ်ပြီး ၎င်းအလုပ်ချိန်တွေကို ရယူမယ်ဆို ''Take swap'' ကိုနှိပ်ပြီး ရယူနိူင်ပါတယ်။
ရယူဖို့ သေချာပြီဆို ''Take'' ကိုနှိပ်ပါ!
မှတ်ချက် - Batch 3,4အဆင့်ရရှိထားတဲ့ Rider များသည် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နှင့် ကြာသပတေးနေ့များတွင် အလုပ်ချိန်လွှဲပြောင်းခြင်း (''Offer Swap'') ပြုလုပ်၍မရနိူင်ပါ။
ကိုယ့်ရဲ့ Rider ID နံပါတ်ကို Rooster မှာ ဒီလိုကြည့်လို့ရပါတယ်!
ကိုယ့်ရဲ့ Rider ID နံပါတ်ကို Rooster> My profile မှာဝင်ရောက်ပြီး အခုလိုကြည့်ရှူ့လို့ရပါတယ်။
Rider လမ်းညွှန်သို့ ပြန်သွားမည်။